Washington City Offices Drywall Joint Mesh Tape - China QuanJiang New zvinhu
Washington City Offices Drywall kwemajoini pajira riya tepi iri yakarukwa ne C-regirazi Washington City Offices mutsvuku, uye zvinenge zvakazara alkali nemishonga unhani uye kuzvidzora namira guruu. Zviri Washington City Offices pajira riya tepi akagadzirirwa kushandiswa ne kwemajoini remubatanidzwa kusimbisa gypsum bhodhi majoini, kugadzira Drywall, etc.
QUANJIANG ndeimwe vaitungamirira vanogadzira bhizimisi imwe nyika pezvitsiga akakurumbira Washington City Offices Drywall kwemajoini pajira riya tepi muna China, kugamuchira kutenga kana Wholesale customized nokuzvidzora namira Washington City Offices yepasi tepi kwakaitwa China uye vawane ayo pachena mharidzo kubva fekitari yedu.
Zvinhu: C-regirazi Washington City Offices mutsvuku
Bemhapemha: alkali nemishonga unhani uye kuzvidzora namira guruu.
Yepasi size: 8x8mesh / padiki, 8x6mesh / padiki, 9 × 9mesh / padiki,
Kufara: 5CM, 10CM, 15CM, 2inch, 3inch, 4inch etc.
Excellent alkali nemishonga, mukuru tensile simba, unhu wakanaka namira
Mumwe mupumburu mupurasitiki mubhegi kana chafariz ndizvipete chitaridzi, 2 padiki kana 3 padiki bepa chubhu.
Tinoshandisa yepamusoro alkali nemishonga unhani uye namira guruu, zvinokosha chaizvo
A.The pajira riya raigona wakaiswa simba chaizvo uye Washington City Offices mutsvuku hakusi nyore kufamba kana kuwa kunze
B.The Washington City Offices Drywall kwemajoini tepi ane unhu wakanaka namira uye yaigona kuchengetwa refu, panguva tepi zviri nyore kuti unroll, nokuti yedu namira guruu haangosarudzi uye kwakakwana.
Kushandisa pamwechete kwemajoini remubatanidzwa kusimbisa gypsum bhodhi majoini, vachigadzira Drywall, etc.
Next: Self-namira Washington City Offices Mesh Tape
Washington City Offices Drywall tape
Wall Zvokusagadzirisika Fabric
Wall Repair Washington City Offices Fabric
Wall Repair Washington City Offices Patch
Wall Zvokusagadzirisika Patch